မန်းဂေဇက်အတွက် ဂုဏ်ယူမိခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းဂေဇက်အတွက် ဂုဏ်ယူမိခြင်း
Posted by manawphyulay on Jun 6, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 30 comments
မန်းဂေဇက်အတွင်း ရေးသားသူများသည် နယ်နယ်ရရများ မဟုတ်ကြောင်းကို မကြာခင်က ဖတ်ရှုမိသည့် စာစောင်များတွင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ခုအပတ်စဉ်ဆက်ဆိုသလို တွေ့ရှိနေရတဲ့
စာမူရေးသားသူကတော့ ဆရာ ထက်ဝေးဖြစ်ပြီး ၂၅ ရက်နေ့ ၅ လပိုင်းထုတ် မန္တလေး အလင်းဂျာနယ်တွင် အင်တာနက် ဇာတ်လမ်း ၂ ကိုတွေ့ရှိရပြီး နောက်ထပ် ထပ်မံ ၁ ရက်၊ ၆ လ၊ ၂၀၁၂ ထုတ် မန္တလေး အလင်းဂျာနယ်တွင် ဆရာထက်ဝေး၏ ညီမလေး ဖတ်ဖို့ ဆောင်းပါးထဲက စိတ်အလှဖြင့် လောကကို အလှဆင်စေကို တွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်။
ထို စာမူများသည် ဂေဇက်တွင် ဖေါ်ပြပြီးသော စာမူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂေဇက် ၀က်ဆိုက်ကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ထို့ အတူ ဂေဇက်၏လုပ်ရှားမှုကို သတင်းအဖြစ် ဧရာဝတီ သတင်းစာတွင် ပန်းတနော် အစုကြီး အလှူ လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် သတင်းပါလာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် များမကြာမှီ ဂေဇက်မှ မည်သည့် စာရေးဆရာတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေမိပါတယ်။ ဂေဇက်ရဲ့ ကလောင်ရှင်များသည် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာစောင်များတွင် နေရာယူလာနေပြီဆိုတာ မပြောပဲနဲ့ သိနေမိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် မန်းဂေဇက်တွင် စာမရေးပဲ ကော့မန့်မပေးပဲ အပြင်ကနေ နေ့စဉ်ဆိုသလို အချိန်တိုင်း ၀င်ကြည့်နေသော စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်း အလွန်ပင် များပြားတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။ တစ်ခါ ကျွန်မ လိုင်းကားစီးရင်း ကားပေါ်မှာ သတင်းတွေ အမြဲချက်ချင်းတင်တဲ့ဆိုက်တစ်ခုကို ရုံးရောက်တာနဲ့ ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာ ဘေးက ခရီးသည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ သူက ပြောပါသေးတယ်။ အဲဒီဆိုက်ကို သူများတွေလည်း ၀င်ကြည့်သင့်ကြောင်း သတင်းတွေတင်မဟုတ်ပဲ ရသ၊ သုတ၊ ဗဟုသုတစတဲ့ အကြောင်းအရာ စုံလင်တယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ နောက်မနောဖြူလေး တင်လိုက်တဲ့ သတင်းတစ်ခုဆိုရင် ခုကားလိုင်းတွေမှာ အရင်လောက် မဖမ်းမဆီးတော့ဘူးလို့လည်း ပြောလာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘယ်ဆိုက်လဲလို့မေးလိုက်တော့ ကိုယ်ကျင်လည်နေတဲ့ ရွာရဲ့ဝက်ဆိုက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ သူကတော့ အပြင်ကနေ စာပဲ အမြဲဖတ်တယ်ဆိုတာ ပြောပါတယ်။
သူမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ သူ့ရဲ့တစ်ရုံးလုံးမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းအကုန်လုံးလည်း အဲဒီဆိုက်ကိုသဘောကျကြတယ်လို့ ပြောတော့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ သတင်းကတော့ အတော့်ကိုပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတာ
ပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ကလောင်သွေးကြသူများစုပေါင်းပြီးလည်း အလှူ ပရဟိတတွေလည်း တူတူလုပ်လာခဲ့ကြတာဆိုရင်ဖြင့် အလွန်ဝမ်းသာအားရရှိမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနော တစ်ခု မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဥမကွဲသိုက်မပျက် အချင်းချင်း ဘာမှမဖြစ်ကြပဲနဲ့ ရှေ့ကို ဆက်လက်ချီတက်ကြပါလို့ ဒီထဲမှာ
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ အစ်ကိုသစ်မင်းတို့၊ လေးဖက်တီးတို့ကိုလည်း ဘယ်တွေများရောက်ပြီး ဘာတွေများလုပ်နေလဲဆိုတာ သိချင်လို့ မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။
အဖွဲ့သားတို့၊ သွားစို့ ခရီးတူ……..
အဖွဲ့သားတို့၊ ရေးစို့ စာပေချိုချို……
ရေးကြသည့်ကဗျာ၊ ကာရန်ညီထွေ အတူစပ်ရင်း
ဟုတ်ပါတယ်ဗျို့ မှန်ပါတယ်ဗျို့ … ဒါနဲ့ စကားမစပ် … နောက်ထပ် အလှူသွားဖို့ ရှိတော့ဘူးလား … စီစဉ်ကြပါအုံး … ပန်းတနော်တုန်းက မလိုက်ခဲ့ရလို့ …
သဂျီးက ဒေါ်ပျိုကြီးကို တစ်သိန်း ချီးမယ်တဲ့
အိပ်နေရင်း တန်းလန်းနဲ့ကျုပ်ကို အိပ်မက်လာပေးလို့ပြောပြတာ..
ချီးမြှင့်တာလား ချီးတာလား သေချာပြောဦး ဟွန်း ချီးမယ်ဆို ဘာမှချီးမစားဘူးနော် သိလား… ကြိုပြောထားတာ။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ မနောလေးရေ….
ကျုပ် ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း ဆယ်လစ်ဗျစ်တီ ဘယ်တော့ ဖြစ်မလဲ ဟင်င်င်င်င်
မန်းဂဇတ် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တည့်တံပါစေ
မန်းဂဇတ်ကြောင့် ချစ်သူသက်ထား ရခဲ့ပါကြောင်း
ဒူလဲ ဟင် ကျောကျမလား ကျောကျဝူးလား ဒါပဲ ကျော ဖရဲနော… လူစုံတုန်း ရှင်းပြ …
ဒါပေမယ့် မဖွဒေါ့ပါဘူးလေ ..
နာ မန်းလေးရောက်ရင် မပြုစုတော့မှာစိုးလို့ …
သဂျီးနဲ့ ရွာသူားတွေ စုပေါင်းညီညာကြလို့လည်း
အခုလို ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
(ဆိုလိုတာက သဂျီးတစ်ယောက်တည်း ကောင်းလို့ မဟုတ်ဘူး။)
ဒီတခါ ရွာထဲမှာ အလှူငွေမဟုတ်ဘဲ
အေး ငါကတော့ ညီးကို ငရုတ်ဆုံလက်ဖွဲ့မယ်။ ဒါမှ တသက်လုံးမှတ်မိနေအောင်။
ဖရဲ .. ရေ .. ငါကတော့ မင်းအတွက် ငရုတ်ကျည်ပွေ့  (ရှယ်) လက်ဖွဲ့ ပါ့မယ်ကွယ် ..။ မင်းမိန်းမ မင်းကို ပစ် တဲ့အခါ ငါ့ကို သတိရ ပေါ့ကွာ …။
ဖရဲ အတွက်လက်ဖွဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကျောက်တုံး အကြီးကြီးရှိတယ်။
ကျောက်စိမ်းအစစ် ဒါပေမယ့် ရောင်းစားမရ လို့ အဝတ်လျှော်ဖို့ တုံး လုပ်ထားရတယ်။
ဂယ်ပါ ရက်ရက်ရောရော ကို လက်ဖွဲ့ ပလုက်မယ်။ ဟီး၊။။ ၊၊
မှတ်ချက်။ ။ ကားခ မတတ်နိုင်ပါ။
မနောရေ ဂုဏ်ယူစရာ Post လေးအတွက် ကျေးဇူးနော်။
ဆရာထက် ကိုလဲ Congratulations! ပါ။ :-)
မင်းက စ မှတော့ စစ်ဆေးမှု နဲနဲ လုပ်ပါရစေ။
ဓာတ်ပုံတွေ ထဲ က အရဆိုရင်တော့ မင်း အနားမှာ …..တွေ့တယ်။
အင်း …… ;-)
ဝှူး .. တော်သေးရဲ့ အဲဒီခရီးကို မလိုက်ဖြစ်လို့
မန်းဂဇက် ကတော.တကယ်.ကိုနာမည်ကြီး ပါဘဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်တာနက်ကနေ မကောင်းပြောထိုးနှက်နေတဲ.
အဖွဲ.က သူကြီးတို. အမေရိကားမှာအခြေစိုက်ဆိုဘဲ အဖွဲက အနဲဆုံး
လူ၁၂ဦးပါတယ်တဲ. အမေရိကားမှာခြေရာခံမိတဲ.သူတွေက ၄ဦးဆိုဘဲ
အဖွဲချုပ်ကတော. အမေရိကားက မဟာမိတ်တွေကို အဲဒီလူလေးယောက်ကို ၀ိုင်းစုံစမ်းပေးဘို.
အမလေး တလုပ်ကြီးကို မုန်းတဲ့ အူကြောင်ကို ရှာခိုင်း
သူက ငါးကြော်လေးကျွေးရင် ဘာခိုင်းခိုးင်းရတယ်
အဟီ အူးကြောင် စတာနော်
ရွာထဲက ဆရာတွေ၊ဆရာမတွေဆီမှာ တပြည့်ခံ လေ့လာရင်း
မန်းဂေဇက် member ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကိုတော်တော်များများကြည့်ကြတယ်။
ဆရာahnyartamar နဲ့ အရီး Khin Latt ရေးသားသူ ဆရာမလေး မနောဖြူလေး တို့ ခင်ဗျား
ကျွန်တော်ကို ချီးမွှမ်းကြတာ ကျေးဇူးတင် သလို လေးစားမိပါတယ်။
တကယ်ပြောရရင် ကျွန်တော် က ဂျာနယ်တွေကိုပို့လို့ ပါလာတာပါ
ရွာထဲက လူတွေ လည်း ပို့ရင် ဖေါ်ပြ ခံရမယ် ဆိုတာ အသေ အချာပြောရဲပါတယ်။
တကယ့်ကို စာေ၇း ကောင်းတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။
နောက်တခုက ဂေဇက်မှာ တင်တဲ့ စာတွေကို ပဲ ပြန် ပို့နေတာပါခင်ဗျား။
ရွာထဲမှာ ကျွန်တော် လေးစားတဲ့ သူတွေ ၊ အရေး အသား ကိုအားကျရတဲ့ သူတွေရှိနေပါတယ်
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် က ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ် ရွာသား ၊သူ ပေါင်းပြီးလူ၂၀ရေးတဲ့ စာတွေ ထုတ်ဖို့
အခု မဖြစ်သေးပါဘူး။ အရည် အချင်းရှိတဲ့ စာမူတွေ ရွာထဲမှာရှိသော်လည်း ကျွန်တော်
အားမတန်သေးလို့ မာန်လျှော့ ထားရပါတယ်။ တချို့ ဆရာ /ဆရာမတွေကိုလည်း ကျွန်တော် တိုင်ပင်ကြည့်ဖူးပါတယ်။
ဆိုတော့ကား …ဆရာမ မနောဖြူလေး ဆိုသလို ဂေဇက်ရွာကြီးက တကယ်ရေခံမြေခံကောင်းတဲ့ နေရာ လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ အစက်အပျောက် ကလေးသာ ဖြစ်ပါကြောင်း……။
ရွာသူရွာသား အားလုံးကို လေးစား ခင်မင်လျှက်
နေရာအနှံမှာညွှန်းပါ၏………….မန်းဂေဇတ်အကြောင်းကို သုတ ရသ
မနောတို့ အပုံများ သူ့ကိုယ်စားရှက်တယ်… အဲဒီလူတွေက သဂျီးအမျိုးတွေဟေ့.. သူပိုက်ဆံပေးပီး မြို့အနှံ့လည် ဘတ်စ်စကားစီး လျောက်ဖွခိုင်းထားတာ…။
ဟုတ်လား… ဒါဆို ဒီလောက်ကြပ်တဲ့ကားထဲ လျှောက်ဖွနိုင်တယ်ဆိုတော့ ပိုပြီး ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာပေါ့နော်…
မမနောရေ …….. ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ အလွန်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် …… ဆရာထက်ကို အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ် ………. ရွာထဲမှာပို့စ်တင်ရင် ဗဟုသုတဖြစ်စရာ သတင်းပေးစရာ အကျိုးရှိ တာတွေကို တင်ပေးဖို့စိတ်ကူးလေးတောင်ဖြစ်မိပါတယ် ……..
မန်းဂေဇက်အတွက် ဂုဏ်ယူမိတာက ခုမှမဟုတ်ပါဘူး..
ဟိုးးအရင် စာဖတ်သူဘ၀တည်းက မန်းဂေဇက်ကို အထင်ကြီး လေးစားခဲ့ရတာ ..
ခု လို ကိုယ်တိုင် member ဘ၀နဲ့ ပါဝင်ခွင့် ရလာမှ ပိုပီးတောင် ဂုဏ်ယူရတာပေါ့ …
” ဂေဇက်ရွာကြီး ဆက်လက် တည်တံ့ ခိုင်မြဲ ပြီး အစဉ်တိုးတတ်နေရအောင် ရွာသူရွာသားအားလုံး ကြိုးစားကြပါစို့ “